Nhau - Kuchena KweNickel Alloys
Nickel Alloys Kupisa Kurapa maitiro kazhinji anosanganisira matatu maitiro e kudziyisa, kuchengetedza kupisa, uye kutonhora, uye dzimwe nguva panongova nemaitiro maviri ekupisa uye kutonhora. Maitiro aya akabatana uye haana kumiswa.
Kuchenesandiyo imwe yemaitiro akakosha ekurapa kupisa. Kune nzira dzakawanda dzekupisa dzesimbi kupisa kurapwa. Iko kushandiswa kwekutanga kwemazimbe uye marasha semhepo yekupisa, uyezve iko kushandiswa kwemvura uye gasi mafuta. Iko kushandiswa kwemagetsi kunoita kuti kudziyisa kuve nyore kudzora, uye hapana kusvibiswa kwezvakatipoteredza. Aya masosi ekupisa anogona kushandiswa kupisa kwakananga, kana kupisa zvisina kunangana nemunyu kana simbi yakanyungudika, kana kunyangwe zvinoyerera.
Kana simbi ichidziya, iyo yekushanda inoburitswa mumhepo, uye oxidation uye decarburization zvinowanzoitika (ndiko kuti, iyo kabhoni yezvinhu zvemukati pezvikamu zvesimbi zvakaderedzwa), izvo zvine mhedzisiro yakaipa kwazvo pamusoro pechinhu chevhu zvikamu mushure mekurapa kwekupisa. Naizvozvo, simbi dzinowanzo fanirwa kupisa mukati memhepo inodzorwa kana inodzivirira mhepo, munyu wakaumbwa, uye vharuvhu, uye machira kana nzira dzekuputira dzinogona zvakare kushandiswa pakudzivirira uye kudziyisa.
Iyo yekudziya tembiricha ndeimwe yeakakosha maitiro parameter eanopisa maitiro ekurapa. Iko kusarudzwa uye kutonga kweanopisa tembiricha ndiyo nyaya hombe yekuona mhando yekurapa kwekupisa. Iyo tembiricha yekupisa inosiyana nesimbi yezvinhu iri kugadziriswa uye chinangwa chekurapa kupisa, asi inowanzo shatirwa pamusoro pehumwe hunhu tembiricha yekuchinja kuti uwane yakasimba-tembiricha chimiro. Uye zvakare, iyo shanduko inoda imwe nguva. Naizvozvo, kana pamusoro pesimbi workpiece yasvika panodiwa kudziya tembiricha, inofanirwa kuchengetedzwa pane ino tembiricha kwenguva yakati rebei kuita iyo yekunze neyekunze tembiricha ienderane uye kupedzisa iyo microstructure shanduko. Iyi nguva yenguva inonzi nguva yekubata. Kana yakakwira-simba kuwanda kudziya uye pamusoro kupisa kupisa kuchishandiswa, iyo yekumhanyisa kumhanyisa inomhanya zvakanyanya, uye kazhinji hapana nguva yekubata, nepo nguva yekubata yemakemikari kupisa kurapwa kazhinji iri yakareba.
Kutonhorairi zvakare danho rakakosha mukugadzirisa kupisa. Iyo nzira yekutonhora inosiyana kubva pane kuita kusvika pakuita, uye chinhu chikuru kudzora mwero wekutonhora. Kazhinji, kuvharidzira kune chinononoka kutonhora mwero, kuenzanisa kutonhora mwero kunokurumidza, uye kudzima kutonhora mwero kunokurumidza. Nekudaro, pane zvakasiyana zvinodiwa nekuda kwemakisi akasiyana esimbi. Semuenzaniso, mhango yakaoma simbi inogona kudzimwa panguva imwechete yekutonhora seyakajairika.
Zvadaro: Kazhinji Nickel Alloys Density
stellite mhete, Welding waya, Stellite 6, Chiwanikwa R26 bhaudhi, Stellite 6B, Haynes 25 Waya,